Weeraryahanada ugu Halista badan Premier League oo la soo saaray…..(Salah, Kane, Aguero, Aubameyang, Lukaku iyo xarfaan kale oo waa wayn oo Liiska laga waayay) – Gool FM
(England) 21 Nof 2018. Waxaa la soo saaray Liiska weeraryahanada ugu halista badan Premier League ilaa iminka kal ciyaareedkan waxaana safka hore ku soo baxay dhaliyaha Manchester United ee Anthony Martial.
Tababaraha xulka England ayaa dhawaan Harry Kane ku sheegay gool dhaliyaha ugu fiican adduunka balse waa laga waayay liiskan.
Waxaa sidoo kale Liiska ku jirin Xiddigaha magaca wayn ee Sergio Aguero, Romelu Lukaku iyo Aubameyang .
Waxaase si lama filaan ah Liiska uga soo muuqday dhaliyaha kooxda Chelsea ee Alvaro Morata.
Martial ayaa laad/Shuud kasta uu tuuray ilaa iminka kal ciyaareedkan la beegsaday goosha, Sagaal Shuut uu tuuray ayuu dhammaan goolka la bartilmaameedsaday wuxuuna shabaqa ku hubsaday lix ka mid ah taa oo ka dhigan in 100% ay laadadkiisu saxnaayeen.
Waxaa kaalinta labaad soo galay Reheem Sterling oo la yimid 82 boqolkiiba oo 17-shuut uu tuuray ayuu 14 ka mid ah goolka la beegsaday wuxuuna shabaqa dhex dhigay 6- ka mid ah darbooyinkaas.
Eden Hazard ayaa noqday weeraryahanka saddexaad ee ugu halista badan Premier League kal ciyaareedkan oo 17-aad uu tuuray ayuu 13-ka mid ah la beegsaday goolka halka uu dhaliyay 7-gool.
EEG Liiska Xiddigaha ilaa iminka uGu halista badan Premier League kal ciyaareedkan ilaa iminka: